Degmada Burtinle oo laga bilaabay howl-galo looga soo horjeedo Dhul-xirmaysiga – Radio Daljir
Degmada Burtinle oo laga bilaabay howl-galo looga soo horjeedo Dhul-xirmaysiga
Nofeembar 4, 2015 4:21 b 0
November 04, 2015 (Daljir) — Maamulka gobolka Nugaal, taliska qaybta booliska maamulka degmada Burtine iyo saraakiisha saldhiga degmada Burtinle ayaa deegaamo hoosyimaada Burtinle waxa ay maanta ka bilaabeen howlgalo ballaaran oo kadhan ah dhulka laxirmaysto.
Howlgaladaan oo ay fulinayaan ciidamada ammaanka ee gobolka Nugaal ayaa waxaa lagu beegsanayaa deegaamo miyiga u badan oo ay dadka deegaanku horay u ooteen si ay u xirmaystaan una jaraan cowska dabiiciga ah ee kabaxa dhulkaasi.
Kulan ballaaran oo lagu daahfurayey howlgalkaasi ayna ka qaybgaleen maamulka gobolka, taliska qaybta booliska, maamulka iyo qaybaha degmada ayaa kadhacay saaka degmada Burtinle waxaana dhammaan dhinacyadii ka qaybgalay ay bogaadiyeen howlgaladaasi.
Qaar kamid ah waxgaradka iyo haweenka kunool degmada Burtinle ayaa ka codsaday maamulka gobolka iyo kan degmada inay joogteen howlgalada noocaan oo kale si meesha looga saaro cidkasta oo uu damac kagalo dhulka loo siman yahay.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa sheegay inaysan joojin doonin howlgalkaan inta ay guud ahaan deegaamada hoosyimaada Burtinle ka xaalufinayaan xirmooyinka sharci darrada ah oo keena muran iyo khilaaf.